Cicret Bracelet, gacanta ayaa noqotay shaashad taabasho | Ragga Stylish
Caqli iyo hal-abuur leh, tan jijin Waa shay u muuqda wax ka soo baxay filimka alifleyda sayniska ah, taasina waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku xirnaato waqti kasta. Aan aragno shaqooyinka xiisaha leh ee tan qalab mustaqbalka.
Waxay umuuqataa a jijin caadiga ah ee lagu xidho curcurka, haddana. Ku Cicret jijin Waa shay gabi ahaanba tiknoolajiyad sare oo kuu oggolaanaya inaad ku xirnaato dhowr ilbiriqsi sidii ay u tahay casriga casriga ah. Ku qalabaysan pirojekto-qaadaa, qaybaha dambe ayaa ku soo bandhigaya gacanta a interface iftiinka kaas oo ay macquul tahay in loo maro sida a lambarka taleefanka mobile.
Tan waa ku mahadsan tahay Mashruuca fiidiyowga Guntin, iftiin iyo isafgarad aad u yar, gacanku wuxuu isu beddelaa kiniin dijitaal ah halkaas oo sawir leh kala duwanaansho heer sare ah lagu faafiyo, mahadnaqa tikniyoolajiyadda LED. Ku qalabaysan saxnaan weyn, jijimadani waxay leedahay siddeed dareemayaal oo iftiimiya dusha sare ee piel, loo beddelay shaashad taabasho ah. Oggolaanshaha xiriir WiFi, Jawarka Cicret wuxuu kaloo leeyahay shaqo Bluetooth ah oo uu ku xiran yahay smartphone.
Lagu soo bandhigo midabyo kala duwan, oo leh a kaadhka xusuusta 16G, ama 32G, jijimadan ayaa haatan lagu iibiyaa gudaha Indiegogo, waayo, 320 euro, halka moodelkii dhammeeyayna waa in suuqa looga suuq galiyaa qiyaastii 600 euros.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Cicret Bracelet, gacanta ayaa noqota shaashad taabasho ah
Beardilizer, bacrimin aan horay loo arag gadhka